Palestina: Deir Yassin, notsarovana in-60 mihoatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2018 5:02 GMT
Manamarika ny fandripahan'olona tao Deir Yassin, izay namonoan'ny kômandôn'ny Irgun (tarihin'i Menachem Begin) sy ny Stern Gang vao maraimbe ireo Palestiniana miisa 100 tany ho any ny andron'ny 9 avrily. Manamarika izany voina nitranga 60 taona lasa izay [70 taona raha ny amin'ny teny malagasy] izany ny bilaogera.
Ny Palestiniana Haitham Sabbah mametraka rohy mankany amin'ny habaka DeirYassin ary manoratra:
Ny maraimben'ny 9 avrily 1948, nanafika an'i Deir Yassin, tanàna kely onenan'ny Palestiniana miisa 750, ny kômandôn'ny Irgun (notarihan'i Menachem Begin) sy ny Stern Gang. Miorina ivelan'ny faritra natokan'ny Firenena Mikambana ho an'ny Fanjakana Jiosy ilay tanànakely; malaza ho milamina ao. Saingy miorina amin'ny tany avo amin'ny lalantsary mampitohy an'i Tel Aviv amin'i Jerosalema. Naravona hametrahana voanjo araka ny Plan Dalet i Deir Yassin ary nomen'ny Haganah, herim-piarovana jiosy lehibe indrindra, alalana ny hery mpampihorohoro tsy ara-dalàna an'i Irgun sy ny Stern Gang hanatontosa ny fananiham-bohitra.
Indro koa i Sabbah nandrohy nankany amin'ny tranonkalan'ny Institute for Middle East Understanding [Ivontoerana ho an'ny Fifankahazoana Afovoany Atsinanana], izay manana torohay bebe kokoa momba ilay fandripahana.
Attending The World nitaratra hazavana amin'ny antony ara-politika nahatonga ny fandripahana, nanatsonga ny tenin'i Menachem Begin, efa nahazo ny Loka Nobel Fandriampahalemana sady Praiminisitra Likud voalohany an'Isiraely:
Tao amin'ny lahatsoratr'i Al- Falastiniya's iray, I am Dier Yassin [Izaho no Dier Yassin], nilaza ity vehivavy ity fa mihoatra noho ny “isan'ny maty” i Deir Yassin:
Otto's Random Thoughts, Carousel ary MyDD nandrohy nankany amin'ny Minisitra Afrikana Tatsimo misahana ny fitsikilovana, ny lahatsoratr'i Ronnie Kasrils ao amin'ny habaka Electronic Intifada.
Mahita lahatsoratra avy amin'i John Hilley koa isika, izay mandresy lahatra fa tsy lazaina amin'ny fampitam-baovao tandrefana ny fandripahana tao Deir Yassin:
Farany, Free the Detainees mizara amintsika sehatra avy any New York manao fahatsiarovana ny fandripahana tao Deir Yassin ato.
Ny sary rehetra dia nindramina tao amin'ny habaky ny Deir Yassine avokoa.